Alahady fahaenina Paka – 25/05/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 8, 5- 8. 14- 17 )
Nametrahany tanana izy ireo ka nandray ny Fanahy Masina
Tamin’izany andro izany, i Filipo Diakra dia nidina tany an-tanànan’i Samaria, ka nitory an’i Kristy tamin’ny olona tao. Nandre sy nahita ny fahagagana nataon’i Filipo ny vahoaka maro be, ka nihaino tsara izay nolazainy. Fa maro ny olona azon’ny fanahy maloto no nivoahany tamim-pikiakiahana mafy; betsaka ny malemy sy ny mandringa no sitrana koa; ka hafaliana moa izany no tao amin’izany tanàna izany!
Rahefa ren’ny Apostoly tany Jerosalema fa nandray ny tenin’Andriamanitra ny tany Samaria, dia nirahiny hankany Piera sy Joany. Nony tonga tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an’ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina; satria vita batemy tamin’ny anaran’i Jesoa Tompo izy ireo, fa tsy mbola nisy nidinan’ny Fanahy Masina na dia iray aza. Dia nametrahany tanana izy ireo, ka nandray ny Fanahy Masina.
Vakiteny faharoa: Taratasy voalohan’i Md Piera Apôstôly (1 Pi 3, 15-18)
Novonoina tamin’ny nofo i Kristy, fa novelomina tamin’ny fanahy.
Ry hava-malala, i Kristy Tompo no ankamasino ao am-ponareo. Aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly amin-kamoram-po sy fanajana an’izay rehetra manontany anareo ny amin’ny antony fanantenana izay ao anatinareo. Aoka ho tsara ny hitsim-ponareo, mba ho amin’izay anendrikendrehana anareo indrindra no hampahamenatra an’ireo mpanaratsy ny fitondran-tena tsara ataonareo ao amin’ny Kristy. Fa aleo amin’ny fanaovan-tsoa no miaritra fahoriana, raha izany no sitra-pon’Andriamanitra, toy izay amin’ny fanaovan-dratsy. Na i Kristy koa aza, niaritra fahafatesana indray mandeha noho ny otantsika, dia Izy marina ho an’ny tsy marina, mba hanolorany antsika amin’Andriamanitra, ka novonoina tamin’ny nofo Izy, fa novelomina tamin’ny fanahy.
Evanjely masina nosoratan’i Md Joany (Jo 14, 15-21)
Hangataka amin’ny Raiko Aho, ka homeny Mpanafaka alahelo hafa ianareo.
Tamin’izany andro izany i Jesoa nilaza tamin’ny mpianany hoe: “Raha tia Ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko. Ary izaho kosa hangataka amin’ny Ray, ka homeny Mpanafaka alahelo hafa ianareo, mba hitoetra ao aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin’ny fahamarinana, izay tsy azon’izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany ka tsy fantany, fa ianareo no hahafantatra Azy, satria hitoetra ao aminareo sy ao anatinareo Izy. Tsy havelako ho kamboty ianareo, fa hankaty aminareo Aho. Raha afaka kelikely, dia tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao; fa ianareo no hahita Ahy, satria velona Aho, ary ho velona koa ianareo. Amin’izany andro izany, dia ho fantatrareo fa izaho ao amin’ny Raiko, ianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina azy no tia Ahy; ary izay tia Ahy, dia ho tian’ny Raiko, sy ho tiako koa, ka haneho ny Tenako aminy Aho”.